ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ တင်ဒါခေါ်မည် Uploaded by paukkaya.lay at Your Listen
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ တင်ဒါခေါ်မည်
This music and or audio is not accessible due to copyright violations ."ITD ကို ရပ်နားလု� ..." has been removed due toacopyright notification. Keep exploring! You can find more similar and music and audio here - ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ တင်ဒါခေါ်မည်
Tags: dawei deep sea porttenderinvestmentjapan
ITD ကို ရပ်နားလိုက်ပြီး အခြားကုမ္ပဏီတွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန်အတွက် တင်ဒါခေါ်သွားမည်ဟု စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူများက ရန်ကုန်မြို့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ရုံးတွင် ၂၊ ၁၂၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြော